Ny niandohana, ny fivoarana ary ny mampiavaka ny soavaly Friesiana | Soavaly Noti
Ny soavaly dia iray amin'ireo biby mahavariana indrindra izay misy eto ambonin'ny planetantsika. Ny fahamendrehany, ny toetrany ary ny tanjany dia nahatonga azy ho tonga iray amin'ireo zavaboary izay nitana andraikitra lehibe teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ary ilay lehilahy sy soavaly toa mandeha an-tanana mandrakizay, miara-mivoatra. Raha ny marina, vokatr'ity fivoarana ity dia nipoitra ireo karazana soavaly isan-karazany izay fantatsika ankehitriny. Ny iray amin'izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe soavaly friesiana.
Tsy isalasalana fa ity kilasin'ny equines ity, izay fantatra ihany koa amin'ny anarana malaza soavaly frizianinaIzy io dia iray amin'ireo mahavariana indrindra ary manintona indrindra raha vao jerena. Ny toe-javatra toy izany dia nanjary nitombo laza teo amin'ireo mpiompy sy mpitia soavaly.
Ho an'ireo rehetra izay tsy dia manana referansa firy na tsy mahalala loatra ny soavaly Friesiana dia manome torohevitra anao aho mba hamaky ity lahatsoratra manaraka ity izay hamarininay amin'ny an-tsipiriany, ankoatry ny zavatra maro hafa, ny niavian'io biby tsara tarehy io.
1 Ny niandohana sy ny fivoaran'ny soavaly Friesiana
2 Mampiavaka ny soavaly Friesianina
3 Ny soavaly Friesiana anio
4 Vidin'ny soavaly Friesiana
Ny niandohana sy ny fivoaran'ny soavaly Friesiana
Ny anaran'io soavaly io dia manondro ny faritra niakarany. Ny faritr'i Friesland, na ny tena izy hoe "Friesland", no toerana nahaterahan'ny soavaly Friesiana. Ity toerana ity dia any avaratry ny Netherlands, na dia eo aza ny faritra sasany any avaratr'i Alemana.
Ny tany mangatsiaka, voahodidin'ny farihy marobe, dia nidika fa tsy tsara araka izay azo atao ny fari-piainana any, noho izany dia tsy maintsy natanjaka sy mahatohitra ny mponina ao. Angamba, io toe-javatra io no lakilen'ny toetran'ny soavaly Friesiana, satria manatanteraka tsara ireo toetra voalaza etsy ambony izy io, ary nanamarika ny fivoarany amin'ny ho avy.
Nanomboka niditra an-tsehatra ny soavaly Friesiana tamin'ny taona 150 tany ho any amin-kery, ary ny zanany dia voatendry, ambonin'izany rehetra izany, hanome anjara amin'ny kopia amin'ireo iraka ady samihafa.
Tsikelikely, ny fandrosoan'ny teknolojia no nahatonga ny soavaly, tamin'ity tranga ity, ny Friesiana, nandao tsikelikely ny asany tamin'ny ady. Raha ny marina, rehefa nandeha ny taona, ny soavaly Friesiana dia nandao ny ady ary niditra tamin'ny fomba fiaina aristokratika tamin'izany fotoana izany. Raha ny marina, ny iray amin'ireo sary voalohany nipoiran'ilay soavaly Friesiana dia tsy iza fa ilay malaza sarin'i Don Juan any Aotrisy mitaingina soavaly Friesianina any Naples, nanomboka tamin'ny 1568.
Efa avy amin'ny SVII, ny soavaly Friesiana dia nanomboka nahazo toerana tao amin'ireo sekoly mitaingina samy hafa niaraka tamin'ny soavaly espaniola purebred.. Mety nisy ny lakroa teo anelanelan'ny karazany roa, satria ny soavaly Friesianina ankehitriny dia misy itovizany amin'ny Espaniola.
Saingy nihodina tampoka indray ny ain'ilay soavaly Friesiana ary tonga biby nananan'ny ankamaroany fanatrehana ny asa eny amin'ny saha ary indrisy, niampita indray tamin'ny hazakazaka hafa koa izy ireo mba hampihenany ny toetrany matanjaka amin'ny lafiny sasany. Na dia nanomboka nanana fanatrehana matanjaka amin'ny circus. Tandindomin-doza ity, ary tamin'ny fomba ahoana, ilay karazana soavaly Friesiana tsy madio, izay niafara tamin'ny taona 1879 fa nisy vondron'olona nanangana fikambanana hitazomana ity sokajy soavaly antsoina hoe Fisoratana anarana amin'ny boky.
Nanomboka teo, ny ain'ilay soavaly Friesiana dia tsy fandriana raozy, fa nandia fotoan-tsarotra tokoa. Soa ihany, ny asa tsara nataon'ireo rehetra liana amin'ity biby goavambe ity dia namela ny mampiavaka azy sy ny anarany hitahiry mandritra ny taona maro mandra-pahatongantsika ny androntsika, hiambina ny lanja sahaza azy.
Mampiavaka ny soavaly Friesianina
Araka ny efa nanamarihana nanerana ny lahatsoratra, ny soavaly Friesiana dia mety ho iray amin'ireo karazany tsara tarehy, tsara tarehy ary mahavariana misy indrindra. Biby mametraka ny maso mitanjaka, nefa mahasarika.
Somary matanjaka ny vatany, manome endrika ny zavaboary matanjaka sy matanjaka. Ny haavon'ny halaviran'ny fiarovan-doha ka hatramin'ny malazo dia mety miovaova arakaraka ny 1,60 sy 1,70 metatra. Mikasika ny lanjany, ity soavaly ity dia mety hahatratra ny taonina, na dia ny mahazatra aza dia ireo kopia tafiditra ao anelanelan'ny 600 sy 900 kilao.
Ny tena mampiavaka ny soavaly Friesiana dia ny palitao mainty. Ny mainty dia, tsy isalasalana, ny lokony ary tsy misy tonony hafa avela, na dia marina aza fa misy soavaly Friesiana izay misy teboka fotsy eo amin'ny faritry ny handrina, na manana loko volontsôkôlà sy jet. Ny rambony sy ny boriboriny malaza koa dia miavaka amin'ny lafiny lehibe, sady feno volo be dia be izay, indraindray, miteraka fehiloha tsy tanteraka. Ny ranjo amin'ny tapany ambany dia misy volo koa.
Soavaly hozatra manana tratra lehibe, loha lava, lava hatoka, ary vodin-doha, lava, somary mitongilana kely.
Ny mampiavaka ny soavaly Friesiana dia ny toetrany. Biby manan-kaja, miaraka amin'ny mettle, mahery fo sy milamina. Ireo fanomezana rehetra ireo dia nahatonga azy soavaly tena mety ho an'ny fambolena sy ny drafitra asa.
Ny soavaly Friesiana anio
Androany, ny andraikitry ny soavaly Friesiana dia tsy mitovy amin'ny an'ny razany taonjato maro lasa izay. Izany fiandrianana rehetra izany, ny hakantony ary ny hatsaran-tarehy izay noresahintsika teo aloha dia nahatonga azy handao ny fiainana sy ny asa eto amin'ny firenena Ampidiro amin'ny fampirantiana mpitaingin-tsoavaly izay an'ny ankamaroan'ny sehatry ny akanjo.
Ary ny estetika manaitra toy izany no nanampy ny fomba fandehanan'izy ireo tamina dingana hentitra sy mirindra, nahavita nanamboatra ny zanany, indrindra, mba handraisana anjara amin'ity karazana hetsika ity.
Vidin'ny soavaly Friesiana
Ny fahazoana soavaly amin'izao fotoana izao dia tsy asa toa mora vidy tokoa. Ireo biby ireo dia manana vidiny lafo, miovaova, eny, misy antony isan-karazany toy ny firazanana, taona, firaisana, sns.
Raha ny amin'ilay soavaly Friesiana dia tokony homarihina fa ho iray amin'ireo karazany malaza indrindra dia tsy manana vidiny tafahoatra izy io. Afaka mividy kopian'ireto soavaly ireto izahay amin'ny a sanda izay eo anelanelan'ny 5000 sy 10000 euro, izay mahazatra 7000 euro kokoa.
Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity izahay dia antenaina fa efa nahafantatra bebe kokoa momba ilay soavaly Friesiana ianao, ary liana kokoa amin'ny fahalalana an'io biby tsara tarehy io ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Soavaly Friesiana